Olee otú imelite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 mbipute GT-I9300 | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | ROM, Samsung, Nkuzi
Oddly ezu na ọtụtụ ndị na-eche na ụwa nke Roms bụ ugbua na doldrums, nke a abụghị n'ezie ikpe ebe ọ bụ na ugbu a karịa mgbe ọ bụla na mbata nke gam akporo Nougat ma ọ bụ gam akporo 7, ekele Roms dị ka oru ngo OSage agbụrụ ma ọ bụ ihe na-abịa n'ihu nke Cyanogenmod, taa m ga-akụziri gị melite Samsung Galaxy S3 ka arụ ọrụ zuru oke gam akporo 7.1 Nougat.
Nkuzi aka a nke M na-egosi gị usoro otu esi emelite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 ma ọ bụ gam akporo Nougat, Ọ bụ naanị maka mba ụwa ma ọ bụ mara amara nke ọma GT-I9300, ebe a ị ga-ahụ ihe niile ịchọrọ iji melite ọdụ a Samsung zuru ebe niile na, n'agbanyeghị agbanyeghị nke Samsung, ọ ka nwere ike ịkwaga n'ụzọ zuru oke ọhụụ kachasị ọhụrụ mbipute nke gam akporo.
1 Chọrọ iji melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 Nougat model GT-I9300
2 Faịlụ chọrọ iji melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 Nougat (ihe atụ GT-I9300).
3 Samsung Galaxy S3 melite usoro gam akporo 7.1 Nougat
Chọrọ iji melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 Nougat model GT-I9300
O doro anya na ị nweela ọnụ gị na mgbọrọgwụ na mgbake gbanwere, ọ bụrụ na ọ gafere ozugbo iji zoo nọmba 3:
Nwee usoro nke Samsung Galaxy S3 GT-I9300 nke Samsung Galaxy
Nwee onu Mgbọrọgwụ na gbanwetụrụ mgbake dị ka m na-egosi gị na post a.
Mee nandroid nkwado nke usoro ihe niile site na TWRP Iweghachite gị ma chekwaa ya na ebe nchekwa na sdcard n'èzí Galaxy S3.
Melite TWRP Iweghachite na ụdị nke kachasị ọhụrụ dị na ukara TWRP ngwa ma ọ bụ na Flashify. Site na njikọ a m na-egosi gị otu esi ebudata ihe oyiyi kachasị ọhụrụ dị na TWRP Iweghachite na n'okpuru ị ga-ahụ njikọ iji budata ngwa ndị ahụ.
Mee nkwado ndabere nke folda EFS site na Iweghachite TWRP n'onwe ya site na Ndabere nhọrọ, na-enyocha naanị nhọrọ EFS.
(Nhọrọ), mee nkwado ndabere nke ngwa gị na data gị na Titanium Backup ebe ọ bụ na usoro mmelite ihe niile ga-ehichapụ.
Kwado nhọrọ nbipu USB site na Ntọala ma nwee batrị zuru ezu.
Ngwa TWRP gọọmentị
Developer: Otu egwuregwu merie LLC
Flashify (maka ndị ọrụ mgbọrọgwụ)
Faịlụ dị mkpa iji melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 Nougat (GT-I9300 nlereanya).
Ga-eme budata faịlụ abụọ abịakọrọ na zip zip ma detuo ha na-enweghị nkụda mmụọ na ebe nchekwa ma ọ bụ mpụga nke Samsung Galaxy S3:
Budata Samsung USB ọkwọ ụgbọala
Budata usoro ntanetị 14.1-20170113-UNOFFICIAL-i9300.zip
Budata Gapps gam akporo 7.1 Nougat ARM 32 bits
Samsung Galaxy S3 melite usoro gam akporo 7.1 Nougat
Ihe oyiyi ndu adabaghị na ụdị TWRP kachasị ọhụrụ
Ozugbo ịmechara usoro niile m kọwara na ihe ndị achọrọ wee budata faịlụ abụọ ahụ dị mkpa, Anyị ga-Malitegharịa ekwentị na Iweghachite na ọnọdụ ma soro usoro ndị a:
Hichapụ, anyị na-ahọrọ Nhicha di elu y Anyị akara akara nhọrọ niile belụsọ ebe anyị depụtaghachila zip faịlụ nke Gapps na Rom. Na ndị ọzọ okwu, ọ bụrụ na anyị depụtaghachiri ya na ebe nchekwa dị n'ime anyị agaghị ahọrọ Hichapụ site na ebe nchekwa dị n'ime ma ọ bụrụ na anyị depụtaghachila ya na mpụga SD Kaadị anyị agaghị ahọrọ ụzọ a. Anyị na-akara ndị ọzọ akara ma sụgharịa n'okpuru iji mee ihe a rịọrọ.
wụnye y anyị họrọ Zip nke Rom na mgbe ahụ-akpali mmanya n'okpuru na ihe na-gburu.
Anyị na-alaghachi ruo mgbe anyị ruru nhọrọ ahụ ọzọ wụnye y anyị na-ahọrọ Zip nke Gapps ma ọ bụ ngwa Google dị mkpa maka Playlọ Ahịa Google ka ọ rụọ ọrụ ma anyị nwere ike ibudata ma wụnye ngwa.
Anyị na-emegharị ogwe ihe ahụ ọzọ na mgbe ọkụ nke Gapps gwụchara, anyị họrọ nhọrọ nke Hichapụ dalvick na oghere nke ahụ gosipụtara na aka ekpe aka ekpe na-esote Reboot System na n'elu ihe mmịfe ahụ.
Anyị slide mmanya na-eme ndị Wipes na mgbe ọ na-agwụ agwụ anyị họrọ nhọrọ nke Reboot System ugbu a.
Na mbu reboot, ọnụ ga-ewe obere oge karịa ka ọ dị mkpa iji bido kpamkpamEchegbula n'ihi na ọ bụ nnọọ nkịtị, ọ pụrụ ịdị ka na ọbụna ruo ihe dị ka nkeji iri ebe sistemụ na-dị na-arụnyere. Ozugbo agbanwuru ya, anyị ga-ahazi ya na data anyị dị ka Wifi, email maka akaụntụ Google anyị ma ozugbo anyị mechara, anyị ga-ahapụ ya n’emetụghị ihe ọ bụla aka nkeji iri ma ọ bụ nkeji iri na ise ka usoro sistemụ ọhụrụ wee rụchaa.
Mgbe nke a gasịrị, anyị ga-amalitegharịa ya, nke ahụ bụ, anyị na-agbanyụ ya kpamkpam ma gbanye ya ọzọ, oge a ịmalitegharị ga-adị ngwa ngwa karị ma anyị ga-enwe ike ibudata ma wụnye ngwa anyị masịrị ma ọ bụ dị mkpa.
Ọ bụrụ n'inwere ndabere nke ngwa gị na Titanium Backup, nke a ga-abụ oge iji wụnye ngwa ma mee mweghachi nke ngwa niile, ọ bụ ezie na m na-adụ gị ọdụ ibudata ma wụnye ihe niile site na ncha maka ntinye zuru oke na ịrụ ọrụ ka mma nke ọnụ.
Site na nke a ị nwere ike kporie ihe ohuru nke gam akporo gi na Samsung Galaxy S3 ihe omuma mba uwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 version GT-I9300
jessika mora dijo
Ndewo enyi, m si Venezuela, s3 gt i9300 m na eriri movistar kwụsịrị ijikọ na wifi site n'otu oge gaa na nke ọzọ, ọ bụ ezie na ọ na-amata netwọk dị, ọ dịghịzi ejikọ ... you chere na ịme nke a nwere ike idozi? Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu
Zaghachi jessika mora
Aga m anwale site na isoro nkuzi a. Mgbe ahụ, m na-ekwu banyere otu o si gaa.
Daalụ nke ukwuu maka iwepụta oge iji mepụta post.
Ndị enyi Androidsis m mere nkuzi ahụ iji tinye Nougat gaa s3 i9300 m. Otú ọ dị, mgbe ịmalite maka oge mbụ Ebe ọ na-ekwu na-emelite, ọ na-amalite imepe windo nke na-ekwu "ọkachamara nhazi na-akwụsị" na site n'ebe ahụ ọ dịghị ihe mere ekwentị anaghị eburu usoro ahụ ma ọ dịghị amalite ma ọlị. Kedu ihe m nwere ike ịme?
JIZỌS SANTIAGO H. dijo
Ndewo Julio, you jisiri ike idozi ya ma wụnye Nogaut? Otu ihe ahụ mere m, enwere m nkwado ndabere iji weghachi ya Belly Jean 4.3, mana achọrọ m imelite ya na nsụgharị kachasị ọhụrụ, ekele!
Zaghachi JESUS ​​SANTIAGO H.
Agbalim ya ma zuru oke, daalụ.
Site n'ụzọ, olee otu m ga-esi gbanye ya ugbu a?
Agbasoro m usoro niile na otu ihe ahụ mere m dị ka JULIO, mgbe m malitere ya nyere m ozi ahụ "ọkachamara nhazi na-akwụsị" na site na ya ọ naghị eme, naanị m jisiri ike hụ ọhụụ ọhụrụ android na mbido , olee otu i mere?
ọ bụrụ na m melite samsung galaxy s3 ka 7.1.1 ida redio? Emelitere m ya na redio nke ekwentị a nwere na achọghị internet, enweghị m ike ịchọta ya
Antonio Jesus Lopez vergara dijo
Nnọọ. Na nke a, olee otu ị ga-esi wụnye google play na ntinye ọ bụla?
Zaghachi Antonio Jesús Lopez vergara
Okporo Zulia dijo
Ekele, kedu ka m ga esi mara ma Gt-i9300 m bu nke mba uwa?
Sony wepụrụ Nougat melite na Xperia Z5, Z3 + na Z4 Tablet
Etu esi emepụta akụkọ Instagram, ọrụ kpakpando nke Instagram